အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း | Manulife Myanmar
Manulife ၏ အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း စာမျက်နှာမှကြိုဆိုပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Manulife ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပြီး ပထမဆုံး Manulife လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လည်ပတ်ခဲ့သလို ပထမဆုံးပေါ်လစီကိုလည်း အဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာပဲ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာမခံစျေးကွက်ထဲကို ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တကျော့ပြန် ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်သလို ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ အာမခံထားရှိသူတွေနဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်း တွေ့ဆုံပြီး ပြောင်းလဲဆန်းသစ်လာတယ့် အာမခံအသစ်တွေအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောြပတာတွေ၊ ရောင်းချဖို့လုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အာမခံစျေးကွက်တစ်ခုလုံး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ စတာတွေမှာလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအတွင်းက လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ အာမခံဘာသာဗေဒအကြောင်းကို ပိုပြီးနှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်လာနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို အာရှဒေသစျေး ကွက်အနှံ့အပြားမှာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေ ကတဆင့်ရယူပြီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းက ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားတွေအတွက် ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိစေဖို့အတွက် ကနေဒါနိုင်ငံ မှာ ကိန်းဂဏန်းသင်္ချာအခြေပြုသိပ္ပံဘာသာရပ်၊ သင်္ချာနဲ့ စာရင်းအင်းပညာ စတဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေး တွေ သင်ကြားခွင့်ရရှိနိုင်မယ့် ထောက်ပံ့မှုမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
Manulife မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ပြိုက်နက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ ခရီးတစ်ခုကို သင့်ဘဝအတွက် အစပြုလိုက်တာဖြစ်သလို ဒါဟာ သင်သွားလိုတဲ့ဘယ်နေရာ ကိုမဆို သွားနိုင်ဖို့ ကနဦးခြေလှမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ Manulife ရဲ့ ဝန်ထမ်း တွေ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သင်မျှော်လင့်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်စနစ်ပုံစံတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ တွေကို ဝေမျှပေးနိုင်ရုံသာမကဘဲ အဲ့ဒီကနေ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေအပြင် အကျိုးရှိပြီး အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခုလို လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုလည်း သင့်ဆီကို ဆောင်ယူလာပေးနိုင်မှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် တောက်ပတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကို အရောက်သွားနိုင်ဖို့ ဝန်ထမ်း ကောင်းတွေကို သတ်မှတ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်သလို စျေးကွက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကောင်း တွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ရာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားရှိထားပါတယ်။ ဒီလို ရည်ရွယ် ချက်တွေကို ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ လိုက်နာပြီး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိနေပါတယ်။
1. ဖောက်သည်များအကြောင်းစဥ်ဆက်မပြတ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း - ဖောက်သည်တိုင်း၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် တင်ကြိုတွက်ဆမှုများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြိုးစားခြင်း။
2. မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း - သမာသမတ်ကျစွာပြုမူခြင်းနှင့် အပြောနှင့်အလုပ်ညီညွတ်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
3. အမျှော်အမြင်ကြီးစွာတွေးခေါ်ခြင်း - မည်သည့်အရာမဆို လက်တွေ့ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်းကို နှလုံးသွင်း၍ အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများကို အမြဲတမ်းရှာဖွေလုပ်ဆောင်ခြင်း။
4. အတူတကွလုပ်ဆောင်အောင်မြင်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီးအသင်း အဖွဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိသူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်အလျောက် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များ ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
5. ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးဖြင့်ရဲဝံ့ခြင်း - ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှုများအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် အခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိစေခြင်း။
6. ကိုယ်ချင်းစာနာမှုများဖြင့်မျှဝေခြင်း - အချင်းချင်းအထောက်အကူပြုခြင်း၊ မတူကွဲပြားမှုများ၊ အကောင်းမြင်စိတ်များထားနှင့် တိုးတက်ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း။